Radanoara Julien : “Aoka ho mailo amin’ny fanomezana zom-pirenena” | NewsMada
Radanoara Julien : “Aoka ho mailo amin’ny fanomezana zom-pirenena”
“Amin’ny tany mahantra: tsy tsara loatra ny hanomezana zom-pirenena ny vahiny, indrindra izay manankarena. Tokony hitandrina ihany ny Antenimierampirenena, lanjalanjaina tsara ny hoe: inona ny tombontsoa hanomezana zom-pirenena ary inona ny voka-dratsiny?”
Io ny fanehoan-kevitry ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien, ny amin’ny tolo-dalàna fanitsiana ny lalàna momba ny fizakana ny zom-pirenena malagasy izay nahemotra ho amin’ny fivoriana ara-potoana manaraka ny fandinihana azy eny anivon’ny Antenimierampirenena.
Lafo vetivety i Madagasikara noho ny fahantrana, raha afa-mividy tany izay manana zom-pirenena. Anisan’ny voka-dratsy izay fahalasanan’ny tany izay. Anjaran’ny tena ny mandinika hoe: amin’izao fahantran’ny Malagasy izao sy amin’ny tany misy eto, eritreretina hoe hanao fambolena be dia be ny vahiny nefa hanamboarany trano hamidiny lafo amin’ny tena izany rehefa avy eo.
Amin’ny lafiny politika: vidiany avokoa ny rehetra, mirotsa-kofidina izy fa miraraka ny vola amin’ny fifidianana; farany, izy no mitondra. Amin’izay, ho gaga ny tena fa olon-kafa ny hitondra an’i Madagasikara: iza ary avy aiza? Valiny fotsiny ny hoe manana zom-pirenena malagasy izy.
Ilaina ny manao fitsapan-kevi-bahoaka
“Alefa fitsapan-kevi-bahoaka no tsara indrindra amin’io: ahoana ny hevitry ny Malagasy?”, hoy izy. Malalaka amin’ny fahazoana mizaka zom-pirenena sy zo mitoetra amin’ny tany no dingana farany amin’ny fidirana ho mpikamban’ny Sadc sy ny Comesa, ohatra. Lasa Malagasy ilay olona Afrikanina ao anatin’izany.
Nefa i Soisa sy i Norvezy, ohatra, talohan’ny fidirany ho mpikamban’ny Vondrona eoropeanina, nanao adihevitra. Samy nandinika ny tombontsoa sy ny fahavoazana avy amin’izany. Iray volana aty aoriana vao nanao fitsapan-kevi-bahoaka: nanao “Tsia” i Soisa, toy izany koa i Norvezy.
Izay koa ny tokony ho natao tamin’ny fidiran’i Madagasikara tamin’ny Sadc sy ny Comesa. Satria ny hiafaran’ireo ho avy eto Madagasikara avokoa ny olona, hanambady sy hividy tany eto: Malagasy tsotra izao. Mandalo ny mpitondra na depiote na iza na iza fa i Madagasikara no tafiditra amin’ny kizo.